Xubno ka mid ah Aqalka Sare dadka u matali doona Jubbaland oo maantay Kismaayo lagu doortay – Radio Daljir
Xubno ka mid ah Aqalka Sare dadka u matali doona Jubbaland oo maantay Kismaayo lagu doortay
Oktoobar 19, 2016 11:39 b 0
Kismaayo, Oct, 18, 2016 – Xildhibaanada Baarlamaanka Jubaland ayaa maanta oo Arbaca ah u fariistey kala saaridda Musharixiinta Aqalka Sare ee Soomaaliya ee Madaxweynaha Jubaland u gudbiyey.
Doorashadii Aqalka Sare ee Jubaland ka dhacdey Waxaa ka qayb-agalay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada dadban iyo qaar kale oo kamid ah guddiga doorashada ee heer federaal.
Musharixiinta Aqalka sare ayaa gaarayey 17 Musharax, waxaana looga baahan yahay 8 Xubnood oo keliya kuwaas oo metalaya Jubaland.
Tartanka ayaa u dhacaayey halkii kursiba mar ayaa loo codeynaayey, waxaana ku tartamaayey laba xubnood, inkasta oo uu jiro kursi saddex Musharax ku tartamayaan. Musharax Axmed Xaashi Maxamuud, oo kamid ahaan jirey hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya ayaa ka guuleystey Prof. Maxamed Cabdi Gaandi oo horey u soo noqdey Wasiirkii Gaashaandhigga ee Soomaaliya ahaana Xildhibaan, Xasan Faarax Xujaale ayaa isagan waxaa la tartamey Maxamed Tarax oo ahaan jirey siyasi si weyn loo yaqaano laba jeerna soo noqdey Wasiir, waxaana si fudud ku guuleystey Xasan Faarax Xujaale.
Gen. Cabdullaahi Shiikh Ismaaciil oo horey u ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubaland kana mid ahaan jirey hoggaamiye kooxeedkii Soomaaliya ayaa isaguna ka guuleystey gabadha kursiga kula qorneyd ee Saynab Maxamed Samoow.
Fatumo Xasan Maxamuud ayaa noqotey gabadhii u horeysey ee kursiga aqalka sare ku guuleysta maamulka Jubaland, waxaana la tartameysey gabadh kale oo lagu magacaabo Waris Cabdi Maxamuud.
Ilaa hadda waxaa soo baxay 5 Musharax waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda la doorto saddexda qof ee dhiman.
Dhanka kale waxaa maanta lagu wadaa in la helo Xildhibaanada aqalka sare ee Koonfur Galbeed, halka Puntland ay u codeynayaan maalinta berri ah.
Si kastaba ha ahaatee waxaa dib u dhac kale ku imaanayaa doorashada Baarlamaanka oo aan aqalka hoose weli lahayn, haba yaraatee.
Dhagayso Warbixinta Khudbadihii Maanta iyo Musharaxiinta Garoowe